FFKM : Halavirina ny Krizy -
AccueilSosialyFFKM : Halavirina ny Krizy
FFKM : Halavirina ny Krizy
20/08/2018 admintriatra Sosialy 0
Nitondra ny hafatra ny FFKM manoloana ny fahatongavan’ny fifidianana, ny pastora David Rakotonirina filohan’ny FFPM (Confédération des églises protestantes de Madagascar). Hafatra izay nentiny ny sabotsy teo, nandritra ny fanokanana ny Lycée David Jones, isan’ny tsangambaton’ny faha-50 taonan’ny FJKM sy ny fahatongavan’ireo misionera (LMS) eto Madagasikara. Mizara telo lehibe ny hafatra, dia ny tokony hanatanterahan’ny rehetra ny adidiny amin’ ny fandehanana mifidy, ny tokony hampisehoan’ireo mpanao politika fahamendrehana imason’ny vahoaka, ary ny fanalavirana ny krizy politika. Nohamafisin’ny pasitora David Rakotonirina fa tsy ho zanaky ny firenentsika intsony ny krizy politika, ka noho izany manao antso ny FFKM ny amin’ ny tokony handraisan’ireo tompon’andraikitra ny andraikiny. Mikasika ny datim-pifidianana moa dia nambaran’ny pasitora David Rakotonirina fa io no efa nivoaka, ary tokony samy hiomana ny rehetra.
Mazava araka izany ny hafatry ny FFKM, indrindra amin’ izao ankatoky ny fifidianana izao. Azo inoana tokoa mantsy fa samy kristianina avokoa ireo kandida sy ny tompon’andraikitra misahana ny fifidianana. Tsy maintsy tanterahin’ny fiangonana rahateo ny antso ho an’ny fitoniana, sy ny fandraisana andraikitra mifanandrify amin’ izany. Ankilany na mbola tsy fifidianana aza, dia efa nampiseho fihetsika tsy maotina ireo kandida toa an’i Andry Rajoelina sy Ravalomanana Marc, izay nitaritan’ireo mpanara-dia azy ireo olona teny amin’ ny kianjan’ny 13 Mai. Fihetsika izay azo lazaina fa mampanahy ireo tompon’andraiki-piangonana, ka hanaovan’izy ireo izao antso amin’ny fandraisana andraikitra izao.